DAAWO VIDEO:Xiisaddii Sool oo soo laabatay, diyaar garawga xuskay 18 May, Somaliland oo xuduudka Puntland<Halkani Riix Video Daawo>
May 16, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 5
maamulka Soomaliland Ayaa Ku Dhawaaqay Inay Joojiyeen Baaburta Iyo ganacsiga Puntland Uga Imaan Jirey,waxayna Sheegtay Soomaliland Inay Joojisey baaburta Iyo Ganacsiga Ka Imaan Jirey Dekada Boosaaso.
Arintani Ayaa Waxaa sabab U Ah Sida Wararka Sheegayaan markii hoos U Dhacday Badeecada kasoo degta Dekada Berbera oo Hada Heshiis Soomaliland kula Jirto DP World,waxayna Baaburta Ugu badan ganacsiga Ilaa Burco ka Imaan Jireen Boosaaso.
Halkani Riix Video Si’aad U Daawato
XAQIIQADA WOQOOYIGA LAGU DADO
Warbixinno iyo faallooyin ukuurgal ah ee ay khubaro rug caddaa ah ka qoreen dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee qabiilka Isaaq teer iyo curashadii qaranka Soomaaliya ayaan anigu soo darsay. Waxaa ka mid ah taariikhyahannada loo yaqaanno Gerard iyo Prof. I.M. Lewis oo taariikhda Soomaalida ku caan baxay.
Xaqiiqada koowaad ee Woqooyiga lagu daboolo waxaa weeyaan in ay Isaaqu waligood ba daaddihin jireen fikirka ah Soomaaliya ha lagu baddalo hannaan ismaamul hoosaad ah ee salka ku haya qabaa’ilka geyi kasta wadaaga oo madax bannaani gaar ah u leh ismaamulkoodaasi. Manifestadoodii October 1981 ayuu ka dhex cad yahay.
Ta labaadi waxaa weeyaan in ilaa iyo burburkii dawladdii kacaanku ay cuqaasha iyo siyaasiyiinta Isaaqu aaminsanaayeen in midnimada qaranka Soomaaliya ay muqaddas la ma taabtaan ah tahay. Xataa shirkii Burco heshiiskii nabadda Woqooyigu mabda’aas ayaa lagu saxiixay ilaa ay jabhaddii SNM goobtii shirka isweer ku sameysay oo….
Qori caaraddii ku khasbeen in heshiiskaas nabadeynta lagu baddalo in ay “Somaliland” gooni u la laabatay “madax bannaanideeda”. Odayaal iyo cuqaal Isaaq u badnaa oo ka dooday toogasho iyo xabsi ayaa loogu handaday. Waxii ka dambeeyay inqilaab jabhadeed baa geyigaasi ka dhacay. Waxaa inqilaabkaasi sababay….
In markii ay dawladdii burburtay ay ciidamadii saldhigyadii meleteri faaruqiyeen iyaga oo ka war sugaya qaabka ay Soomaalidu dawlad cusub dib ugu dhisi doonto. Madaxdii SNM baa waxaa u muuqatay fursad dahabi ah ee ay ku qafaashaan agabkii iyo saanadihii hantida qaran ahaa ee xeryaha lagu faaruqiyay inta dawlad ugub ahi ka bilan doonto. Waa markii ay ka tustay in Isaaqu ay hubkaas geyiga ku muquunin karaan oo ay ugu talin karaan inta aan dawladda cusub la yagleelin.
Afti ku sheeggii la qaaday been abuur qayaxan bay ahayd oo dhammaan beelaha kale u ma codeynin oo xataa Garxajisku ku ma raalli ahayn. Waxii intaas ka dambeeyay saanaddaas ay jabhaddu qaranku ka dhacday ayay geyigaas ku hagardaaminaysay oo heerkan lagu soo gaadhay. Waxayna ogaayeen in Soonaaliya la saaray xayiraad hubka ah oo ay sanado qaadan doonto in dawlad cusubi bilato.
Muddadaas ayay isku dayeen in ay hubka hantida qaran ahaa geyiga ku muquuniyaan oo ay oggolaansha talis ay Isaaqu leeyihiin sanka kaga tolaan. 18ka May khiyaanadaas qaran ayay salka ku haysaa laakiin hub kaligii dad lagu ma muquunin karo sida hadda u caddaatay 30 sanadood ka dib. Curashadii Soomaaliya ka hor na ma jirin dal “Somaliland” loo yaqaannay oo si rasmi ah Qaramada Midoobay uga diiwaan gashanaa.
Waa halkii maahmaahdii labada xaq darada ku heeshisa ee maanta khiyaanadaasi Isaaqii bay kala faquuqday oo ku kala booday. Inta yar ee wali ku mintideysaa na meel ku gaari maayaan waloow ay isku maaweeliyaan BM-yada ayaa la idiin ka baqayaa.
Sababta ugu weyni waxaa weeyaan maalinka ay isku dayaan in ay hubkaas ah hantida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ama magaalo mise shacab Soomaaliyeed ku waxyeelleeyaan dambiyo waaweyn oo heer caalami ah ayay ku dhaci doonaan ay si xun u eedi doonaan.
Beesha Caalamka ayaa qaraarro degdeg ah ka qaadan doonta oo inta ciidan Hargeysa lagu daabbulo SNMta hubka la dhigi doonaa oo la kala eryi doonaa. Qawleysatada madaxda oo ahi ee uu Biixi ka koow yahay na inta la wada qafaalo ayaa sharciga caalamka la marin doonaa.
Biixi iyo xulufadiisu xaqiiqadan way dhaadsan yihiin iyo in aanu hubkaasi culus waxba u tari karin. Waa sababta ay hadda beelaha kale gadhka iyo jilibka u haystaan oo ay salaaddiintooda u laaluushayaan si aanay ugu fashilmin filimkii 30 sanadood ay soo jilayeen iyo riya maalmeedkii ahaa Isaaqa ayaa cuduud geyiga ugu talin kara.
Waxii aad beri tuurtay
In badan baad hibataayee
Baadi doon ma ku raagtay
Isaaqa wey hurdaan waa iney hurdada Ka kacaan.
isaaqu… marka ay hurdada ka toosaan Daaroodka ayay wasaaan.